Kali Linux Rolling Edition: inoenderera inogadziridza | Linux Vakapindwa muropa
Kuparadzirwa kunozivikanwa Kali Linux yakagadzirirwa pentesting, iwe unenge wave neRolling Edition, ndiko kuti, ichaenda kune iyo Rolling Release yekuvandudza modhi. Izvi zvinoreva kuti iwe unozogara uchingogadziridzwa, panzvimbo pekuchinja kamwe kamwe kubva pane imwe vhezheni kuenda kune imwe. Izvi zvakaziviswa nevagadziri veiyi distro muna Ndira 21, 2016. Iyo inoshanda sisitimu iri kugadzirira iyo Rolling Release vhezheni pakukumbirwa kwevashandisi vazhinji vanoita kunge vanogadzikana nekugara vachigadzirisa pane nekushanduka kwekusvetuka.
Iko zvirokwazvo kune gakava pakati pevanogadzira pane iri iyo yakanakisa yekuvandudza nziraMuchokwadi, mapurojekiti mazhinji akaendeswa mukuburitsa kuburitsa mumakore apfuura. Ndosaka vanogadzira chirongwa chikuru ichi vateerera vashandisi vayo uye vafungisisa pachiri kuti vabatanidze ino sisitimu nyowani kune yavo distro yekugutsa vese avo vanoshanda neanoyevedza suite. Kunyangwe hazvo vamwe vachisarudza nzira yakajairwa, asi iyi Rolling Regedza vs Yekuregedza Hondo isu tinoisiya kunze kwechinyorwa chino.
Kali Linux 2016.1 ichave iri yekutanga vhezheni yeKali Linux Rolling Edition. Inouya mushure memwedzi yekuyedzwa uye kusimudzira. Ichave iine yazvino vhezheni yezvakawanda zvinosanganisirwa pentesting maturusi uye ichaenderana neDebian GNU / Linux 9.0 Stretch solid solid release repositories. Saka zvaKali Linux 2.0 Sana, ino ichave iri nyowani yekuvandudza nzira sekuziviswa zviri pamutemo.
Kunze kwekuvandudzwa kwemapakeji akaitwa muKali Linux 2016.1 uye iyo rolling kuburitsa system, pachave zvakare nekugadziriswa uyezve dzimwe nhau kuti avo vakazvipira kunyika yekuchengeteka vanozokoshesa. Imwe yadzo kubatanidzwa kweKali Linux Package Tracker, chishandiso chepamhepo chinobvumira vashandisi kuteedzera shanduko yeKali inoshanda sisitimu kuburikidza ine simba rewebhu-based interface kana kuburikidza neemail meseji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kali Linux Rolling Edition: inoenderera inogadziridza